Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pandrindrana an'i Nicholas Tesla | Saoly Perlmutter - Fikarohana momba ny vatana teraka
Navoaka ny Thomas Edison | Elon Musk raharaha momba ny vatana, Nieritreritra aho fa mety ho liana amin'ny famoahana ireo tranga vaovao momba ny fanambadiana ianao Nikola Tesla, izay niara-niasa tamin'i Edison ary taty aoriana dia nanjary mpifaninana tamin'ny adihevitra raha tokony hampiasaina ny angovo DC na AC mba handefasana hery herinaratra. Tao amin'ny fivoriana iray niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontaniako aho hoe misy ny fanabeazana malaza an'i Tesla ankehitriny.
Ahtun Re dia nanambara fa ny fanabeazana ankapobeny indrindra an'i Tesla dia ny an'ny Saoly Perlmutter, astrophysiste izay nahazo ny loka Nobel 2011 ho porofo fa ny fanaparitahana izao tontolo izao dia mihamitombo. Nanazava i Ahtun Re fa amin'ny fanabeazana an'i Perlmutter, ny fanahin'i Tesla dia te-hiasa amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpahay siansa hafa, fa tsy miasa amin'ny fisorohana, araka ny nataon'i Tesla.
Ahtun Re dia nanambara fa tao amin'ny Perlmutter nofo, ny fanahin'i Tesla dia te-hiaina fiainam-pianakaviana ihany koa. Ny ampahany mampalahelo amin'ny tantaran'i Tesla dia ny nipetrahany irery ary maty irery tao amin'ny efitranon'ny New Yorker Hotel, izay toerana onenany.
Raha ny momba ny endriky ny tarehimarika, dia tena nanamaivana ny fiafaran'ny fiainany i Tesla ary saika nihena be. Mifanohitra amin'izany, i Perlmutter dia manana tarehimarika manilikilika izay mifanaraka kokoa amin'i Tesla amin'ny maha-tovolahy azy. Amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny fampodiana Perlmutter ny fanahin'i Tesla dia afaka nankafy ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpahay siansa hafa, ary koa mankafy fiainana ara-tsosialy sy sakafo hafa.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny rafi-taolan'ny tanora Tesla sy i Saul Perlmutter dia tsy mifanaraka tsara. Ny fahasamihafana dia azo ampisehoana ny Perlmutter manana lanjany ara-dalàna kokoa, ary koa ireo anton-javatra ara-poko sy foko.
Ny fiainana taloha talenta: Ny fanomezam-pahasoavana an'i Tesla ho an'ny siansa sy ny teknolojia dia voamarina amin'ny fiainan'i Perlmutter.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Edison sy Tesla dia mpiara-miasa akaiky, niaraka tamin'i Tesla niasa tao amin'ny laboratoara Edison talohan'ny nipoiran'ny Tesla irery. Miaraka amin'i Elon Musk's SpaceX dia toa mifankahalala i Elon sy i Saola, na dia tsy fantatro raha efa nifankahita izy ireo.
Fiovana amin'ny finoana, ny maha-firenena ary ny fiaraha-monina: Tesla dia teraka ho an'ny ray aman-drenin'ny Serba ao amin'ny tanàna iray izay any Kroasia ankehitriny. Ny mompera dia mpisorona tao amin'ny Eglizy Ortodoksa Serba, fivavahana kristianina. Mifanohitra amin'izany, Saoly Perlmuller dia teraka tany amin'ny fianakaviana japoney Ashkenazi any Pennsylvania.